मोहन वैद्यको ठहर: नव गठित नेकपा कांग्रेसजस्तै - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
मोहन वैद्यको ठहर: नव गठित नेकपा कांग्रेसजस्तै
विद्यानाथ अधिकारी काठमाडौं जेठ ८
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले एमाले–माओवादीबीच एकता हुनुमा डा. बाबुराम भट्टराईको मुख्य देन रहेको दाबी गरेका छन्। परिस्थितिबस भट्टराई एकता प्रक्रियाबाट बाहिरिए पनि उनैको योजनामा दुई पार्टी मिल्न सम्भव भएको उनले बताए।
एकता पृष्ठभूमिबारे वैद्यले नेपालखबरसँग भने, ‘२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बाबुरामले एमालेसँग कार्यगत एकता गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याएका थिए, त्यतिबेला उनको प्रस्तावलाई हामीले त्यति महत्व दिएनौं। वास्तवमा माओवादीलाई एमालेमा मिलाउनकै लागि उनको यस्तो प्रस्ताव आएको हामीले छनक पाएका थियौं।’
वैद्यले बाबुराम र प्रचण्डले आधारभुत रुपमै कम्युनिष्ट सिद्धान्त परित्याग गरेर एमालेसँग एकताको वातावरण बनाएको दाबी गरे। ‘एमाले धेरै अगाडि माक्र्सवादबाट विचलित भइसकेको र माओवादी केन्द्र पनि विचलित हुँदै गएको सन्दर्भमा एकता स्वभाविक थियो’ उनले भने।
एकतामा भट्टराई किन सामेल भएनन्?
वैद्यले एमाले–माओवादी एकताका योजनाकार बाबुराम भने अन्तिम समयमा आएर पाखा लाग्ने स्थिति बनेको बताए। गोरखा क्षेत्र नं. २ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग कुरा नमिलेपछि बाबुराम एकता प्रक्रियाबाट बाहिरिएको उनले टिप्पणी गरे।
गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा तत्कालिन एमाले, माओवादी केन्द्र र बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन बनेको थियो। पहिले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने र पछि पार्टी एकता गर्ने तीनै दलले सहमती गरेका थिए। तर, गोरखा–२ मा डा. भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैले दाबी नछोडेपछि भट्टराईले वाम गठबन्धन छोडेर कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेका थिए। कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लडेका भट्टराईले त्यसयता निरन्तर वाम गठबन्धनको विरोध गर्दै आएका छन्। एमाले–माओवादी पार्टी एकतापछि त भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत झनै कटु टिप्पणी गरिरहेका छन्।
भट्टराईको यो आक्रोशलाई वैद्य क्षणिक ठान्छन्। नवगठित नेकपासँग नयाँ शक्तिको विचार मिल्ने भएकाले एकताको सम्भावना धेरै रहेको उनको ठहर छ। प्रचण्डभन्दा अघि नै भट्टराई कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट बिचलित भएको वैद्यको दाबी छ। ‘पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रले अपनाएको विचार भट्टराईकै हो। स्वभाविक रुपमा पार्टीको बैचारिक नेता भएका कारण भट्टराईले अध्यक्षमा दाबी गरेका थिए’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै वैद्यले भने, ‘तर, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष नपाउने स्थिति आएपछि उनले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति गठन गरेका हुन्।’
प्रचण्डको विचलनले दुःखी
नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सुधारवादी तथा पश्चगामीहरुबीचको एकता भनेर उनले टिप्पणी गरेका छन्। वैचारिक रुपमा एकै ठाउँमा आइपुगेका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता स्वभाविक भएको वैद्यको ठम्याई छ। तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता र २००६ सालमा स्थापना भएको नेकपाको उत्तराधिकारी भनेर प्रचार गर्नु ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ भन्ने जस्तो भएको उनले बताए।
प्रचण्डका राजनीतिक गुरु वैद्यले प्रचण्डमा पछिल्लो समय आएको विचलनले आफूलाई दुःखी बनाएको टिप्पणी गरे। तत्कालिन नेकपा (मशाल) का महामन्त्री वैद्यले पञ्चायतविरुद्धको संघर्षका क्रममा २०४५ सालमा भएको सेक्टर काण्डपछि प्रचण्डलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए। सो घटना सम्झँदै वैद्यले प्रचण्डमा आफूले नेतृत्वको खुबी देखेको र उनलाई अघि बढाउनु स्वभाविक ठानेको बताए। त्यसो त प्रचण्डकै नेतृत्वमा दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन भएको थियो। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु माओवादी सशस्त्र संघर्षकै देन भएको वैद्यको बुझाई छ।
एकता टिक्ने वा नटिक्ने आधार ब्यक्तिगत जोडघटाउ
वैद्यले एमाले र माओवादीबीचको एकता कति टिक्छ भन्ने कुरा नेताहरुको स्वार्थ र जोड घटाउमा भर पर्ने बताए। सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष गौण भएपछि ब्यक्तिगत स्वार्थ र पदीय भागबण्डाकै आधारमा एकता अगाडि जाने वा नजाने निर्धारण हुने उनको ठम्याई छ। ‘उनीहरु सत्तामा बस्न बानी परेका छन्। सत्ताका लागि जे सुकै गर्न तयार हुन्छन्। विचार मिलेपछि सत्ता स्वार्थ र पदीय भागबण्डा मिलेसम्म फुट्ने सम्भावना रहँदैन। तर, भागबण्डा नमिलेपछि के हुन्छ भन्न सकिंदैन’ उनले भने।
पार्टी एकतापछि नेकपाका नेताहरुमा दम्भ देखिएको वैद्यले गुनासो गरे। साना वामपन्थी पार्टीहरुलाई एकता प्रक्रियामा सामेल हुन नेकपाका नेताहरुले गरेको आह्वान ‘दम्भि मानसिकता’ भएको वैद्यको टिप्पणी छ। ‘पार्टी आकारमा सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन, सही वा गलत के हो वैचारिक पक्षले निर्धारण गर्छ।’ वैद्य भन्छन्।
राष्ट्रलाई कुनै फाईदा हुँदैन
एमाले–माओवादीबीचको एकताले देश र जनताको हित गर्न नसक्ने वैद्यले ठोकुवा गरेका छन्। ‘एकता राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाका लागि गरिएकै होइन’ उनले भने, ‘सत्ता स्वार्थका लागि एकता गरिएको हो, त्यसकारण उनीहरु न सीमा मिचिँदा बोल्छन्, न त नेपाली भूमि डुवानमा पर्दा कुनै प्रतिक्रिया जनाउँछन्।’
राष्ट्रियताका मुद्दामा नेपाली कांग्रेस र नवगठित नेकपाका बीचमा कुनै फरक नरहेको दाबी गरे। नेपाली जनताकै लगानीबाट निर्माण हुनुपर्ने माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएका परियोजना भारतलाई सुम्पेर नेकपाको सरकारले भारतसँग दलाली गरेको उनले आरोप लगाए।
‘अहिले नेपाली कांग्रेस चुनाव हारेर विपक्षमा छ। तर, चुनावमा हार–जीत संसदीय व्यवस्थामा सामान्य प्रक्रिया हो, कांग्रेस वा नेकपा जसले जिते पनि राष्ट्रियताका सन्दर्भमा केही फरक छैन’ उनले भने।
साना कम्युनिस्ट दल मिल्न कसरत
वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुको एकता अपरिहार्य रहेको औंल्याए। क्रान्तिकारीहरुबीच एकताको पहल स्वरुप मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा(मसाल), विप्लव नेतृत्वको नेकपा र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग राष्ट्रियताका मुद्दामा संयुक्त कार्यक्रमहरु भइरहेको उनले सुनाए। ती दलहरुसँग मिल्ने मुद्दामा कार्यगत एकता र नमिलेका मुद्दामा निरन्तर छलफल गर्दै क्रान्तिकारीहरुबीच ध्रुविकरण र एकताको पहल भइरहेको उनले जनाए।
प्रकाशित ८ जेठ २०७५, मंगलबार | 2018-05-22 16:03:35